Hopitalibe Toamasina: hitory noho ny tandrevaky ny mpitsabo ny havan’ilay maty | NewsMada
Assemblée nationale : une session extraordinaire en vue ...juillet 22, 2019
Fonjan’Ambalatavoahangy: nirefodrefotra ny basy, gadra fito lahy nanao fiokoana ...juillet 22, 2019
Hopitalibe Toamasina: hitory noho ny tandrevaky ny mpitsabo ny havan’ilay maty
Par Taratra sur 14/02/2019
Taorin’ny tsy fahombizan’ny fitsaboana an’i Hortencia, renim-pianakavina 46 taona nararin’ny fibrone ary maty noho ny fandidiana azy tao amin’ny Hopitalibe Toamasina, fantatra fa hametraka fitoriana ny fianakavian’ny maty. Raha iverenana ny zava-nitranga, naiditra
Hopitaly, ny alahady 10 febroary lasa teo, noho io aretina nahazo azy io, ity renim-pianakaviana ity ary naiditra tao amin’ny efitrano fandidiana ao amin’ny Hopitalibe Toamasina ny maraina. Tsy tafavoaka tao izy raha tsy tamin’ny 4 ora tolakandro ary mbola tsy nahatsiaro tena. Nentiny mandra-maty izany tsy fahatsiarovan-tena izany, ny alatsinainy tokony ho tamin’ny 3 ora maraina.
Araka ny angom-baovao teo anivon’ny fianakaviana hatrany, indroa nanaovana fanafody tsy ahenoana fanaintainana (anésthésie locale) ilay renim-pianakaviana handalo fandidiana. Mbola nampiana “anésthésie générale” indray avy eo. Ankoatra izay, teo amin’ny fomba fanjaraina ny kibony, lazain’ireo mpitsabo hafa sy ny fianakaviana fa toy ireny nanjaitra kitapo gony ireny ny nanaovan’ny mpitsabo azy. Nohamafisin’ny fianakaviana hatrany fa tena antandrevaka fotsiny izao ity nataon’ny dokotera ity. Izy rahateo, efa tokony hifindra toeram-piasana any Brickaville fa mbola mijanona ao amin’ny Hopitalibe Toamasna hatrany. Ny talata maraina teo no nihazo an’i Soanierana Ivongo misy ny fasan-drazany ny razana izay namela kamboty mianadahy.
Assemblée nationale : une session extraordinaire en vue 22/07/2019
Fonjan’Ambalatavoahangy: nirefodrefotra ny basy, gadra fito lahy nanao fiokoana 22/07/2019
Atsimo Andrefana: simban’ny bibikely ny voly katsaka sy ny hasy 22/07/2019
Lemaka Bas Mangoky: nomena hisafidy karazam-bary volena ny tantsaha 22/07/2019
Lalam-pirenena – RN2: mila fandaminana ny eo Marozevo 22/07/2019